"De Bruyne Waa Gerrard Iyo Giggs Oo La Isku Geeyey" - Wayne Rooney Oo Sharraxay Sababta Uu Ku Jeclaaday Xiddiga Reer Belgium - Gool24.Net
“De Bruyne Waa Gerrard Iyo Giggs Oo La Isku Geeyey” – Wayne Rooney Oo Sharraxay Sababta Uu Ku Jeclaaday Xiddiga Reer Belgium
Halyeygii Manchester United ee Wayne Rooney ayaa si wyen u amaanay xiddiga Manchester City ee Kevin De Bruyne, waxaanu ku tilmaamay in xirfaddiisu ay tahay mid sarraysa isla markaana uu yahay isku-darka Steven Gerrard iyo Ryan Giggs.
De Bruyne ayaa Manchester City halbowle u ahaa sannadihii u dambeeyey, waxaanay markan ka sugayaan inuu ku hoggaamiyo Champions League oo ay wareegga 16ka hal ciyaar iskugu hadhay Real Madrid oo ay Jimcaha ku wada ciyaari doonaan garoonka Etihad Stadium.
Rooney oo waqtigan u ciyaara kooxda Derby County, ayaa waxa uu sheegay in De Bruyne uu u rumayn karayo riyada City ee raadinta Champions League, sidoo kalena ay xirfaddiisu tahay sidii qayb laga soo qaaday Gerrard iyo qayb kale oo laga keenay Giggs, waxaanu yidhi: “De Bruyne wuxuu i xasuusiyaa xoogaa Steven Gerrard. Wuxuu kasoo galaa dhinaca midigta, waxaanu ciyaaraa kubbado lagu soo dhex tuuray, sidii uu Stevie samayn jiray. Waxa aan inta badan ku jecelahay, waa sida uu fursadaha u qaato, wuxuu u badheedhaa khataraha, kubbadaha si fudud uma hujuumo – Wuxuu ciyaaraa baasas adag.”
Rooney waxa kale oo uu sifeeyey sida uu Ryan Giggs u shabbaho, waxaanu yidhi: “Markii aan la ciyaarayay Ryan Giggs, marka uu kubadda helo Giggsy, waan sii ordi jiray sababtoo ah waxaan ogaa inuu isku dayi doono oo uu iisoo dhiibi doono. De Bruyne waa sidaas oo kale.”
Halyeyga reer England ee Wayne Rooney, waxa uu xusay in hubka ugu weyn ee ay haysato Manchester City uu yahay De Bruyne, waxaanu yidhi: “Shaki kuma jiro in hubka ugu weyn ee Man City uu yahay De Bruyne, waxaana lagu murmi karaa inuu ka mid yahay saddexda ciyaartoy ee ugu wanaagsan dunida waqtigan.”
Si kastaba, Manchester City waxay isku diyaarinaysaa kulanka ay Real Madrid ku martigelinayso Jimcaha, waana lugtii labaad ee wareegga 16ka iyagoo ciyaartii hore kusoo kala baxay 2-1 ay Man City kusoo badisay.